Kooxaha Arsenal iyo Tottenham Hotspur oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Chelsea – Gool FM
(London) 28 Maajo 2020. Kooxaha reer London ee Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay ku dagaalamayaan saxiixa xiddiga reer Brazil iyo naadiga Chelsea ee Willian Borges da Silva.
Heshiiska Willian uu ku joogo kooxda Chelsea ayaa wuxuu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, wuxuuna haatan bar-tilmaameed buuxa u noqday kooxo badan oo ay ka mid yihiin Arsenal iyo Tottenham.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Telegraph” kooxaha Arsenal iyo Tottenham ma heystaan lacag badan oo ay ku dhammaystiraan heshiisyo badan ee xagaaga dambe ah, taasoo ka dhigeysa inay u jeedsadaan sameynta heshiisyo qaar ay ku heli karaan beeca xurta ah.
Si kastaba ha noqotee, labada kooxood waxay aaminsan yihiin in heshiiska ay ku heli karaan Willian uu noqon doono mid guul ah sababao badan awgood, gaar ahaan in uu joogay horyaalka Premier League mudo 5 sano ah, sida uu u yaqaano jawiga iyo luqada, qibradiisa, iyo inuu farqi weyn ka sameyn karo kursiga keydka ee koox kasta uu u dhaqaaqo.
Wararku ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Tottenham Hotspur ay tahay kooxda ugu dhow ee heli karta adeega Willian Borges, sababa la xiriira inuu joogo macalinka reer Portugal ee Jose Mourinho, maadaama ay ka soo wada shaqeeyeen naadiga Chelsea.